ဩစတြေးလျမှာလည်း လူတွေ အပြင်မထွက်ရဲလောက်အောင် လင်းနို့တွေ သောင်းကျန်းနေ
ဩစတြေးလျမှာလည်း လူတွေ အပြင်မထွက်ရဲလောက်အောင် လင်းနို့တွေ သောင်းကျန်းနေ လင်းနို့တွေဟာ လူသားတွေ အပြင် သတ္တဝါ တော်တော်များများကို အန္တရာယ်ပေးနိုင်ပါတယ် ။ သူဟာ ရောဂါပိုးမွှားတွေကို ဖြန့်ဝေနေတဲ့ သတ္တဝါပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ လက်ရှိ ကမ္ဘာပေါ်မှာ လူသားအားလုံး ထိတ့်လန့်နေတဲ့ ရောဂါပိုးတစ်ခု ဖြစ်တဲ့ ဝူဟန်ဗိုင်းရပ်စ် ကလည်း လင်းနို့တွေက စတယ်လို့ ပြောစမှတ် ပြုနေကြပါတယ် ။ အဆိုပါ လင်းနို့တွေဟာ ရောဂါပိုးတွေကို သယ်ယူပြီး သူတို့ ခန္ဓာကိုယ်မှာလည်း ပိုးမွှားများစွာကို သယ်ဆောင်ထား ကြပါတယ် ။ ယခု ဩစတြေးလျ နိုင်ငံမှာလည်း လူတွေ အပြင်မထွက်ရဲလောက်အောင် လင်းနို့တွေ သောင်းကျန်းနေတဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင် တစ်ခု …
အမျိုးသမီးတိုင်း လိုက်နာလုပ်ဆောင်သင့်တဲ့ အလှအပဆိုင်ရာ အခြေခံနည်းလမ်း (၅) သွယ်
အမျိုးသမီးတိုင်း လိုက်နာလုပ်ဆောင်သင့်တဲ့ အလှအပဆိုင်ရာ အခြေခံနည်းလမ်း (၅) သွယ် မိန်းမရယ်လို့ ဖြစ်လာပြီဆိုရင် အလှအပကို ကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုတာ သဘာဝပါပဲ။ အလှမကြိုက်ပါဘူးလို့ ခံယူထားတဲ့ အမျိုးသမီးတွေတောင်မှ အနည်းဆုံးကြည့်ကောင်းသပ်ရပ်အောင် ပြင်ဆင်ကြလေ့ရှိပါတယ်။ ပြင်ဆင်တယ်ဆိုရာမှာ မျက်နှာပိုင်းပြင်ဆင်ခြယ်သမှုသာမက ကိုယ်ခန္ဓာပိုင်းဆိုင်ရာကိုလည်း သန့်ရှင်းစွာနဲ့နေထိုင်ပြင်ဆင်သင့်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အလှကြိုက်သည်ဖြစ်စေ၊ မကြိုက်သည်ဖြစ်စေ မိန်းမတစ်ယောက်မွေးဖွားလာကြသူတွေတိုင်း လိုက်နာလုပ်ဆောင်သင့်တဲ့ အလှအပဆိုင်ရာ အခြေခံနည်းလမ်း (၅) သွယ်ကို စုစည်းတင်ဆက်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ (၁) တစ်ကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းမှုကို အလေးပေးဆောင်ရွက်ပါ။ လူရယ်လို့ဖြစ်လာပြီဆိုရင် တစ်ကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းမှုကို သေချာဂရုတစိုက်ပြုလုပ်သင့်တယ်ဆိုတာ လူတိုင်းအသိပါပဲ။ ဒါပေမယ့် အမျိုးသမီးတွေကတော့ မိမိရဲ့ကိုယ်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းတွေကို ပိုပြီးဂရုတစိုက်နဲ့ သန့်ရှင်းမှုပြုလုပ်သင့်ပါတယ်။ ဥပမာပြောရရင် ရာသီစက်ဝန်းဖြစ်ပေါ်နေချိန်မှာ တစ်ခါသုံးဂွမ်းထုပ်တွေကို ၄ နာရီခြားတစ်ခါလဲလှယ်ပေးတာမျိုး၊ မိမိရဲ့ကိုယ်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းကို ဆပ်ပြာနဲ့မဟုတ်ပဲ နူးညံ့စွာဆေးကြောတာမျိုး၊ …
ကိုယ့်စိတ်ကိုယ်ကိုယ် ဒီလိုအကျင့် (၃) ခုကြောင့် ထပ်ပြီးမနှိပ်စက်ပါနဲ့တော့ … အမှားဆိုတာကတော့ လူတိုင်းနဲ့ မကင်းတဲ့အရာပါ။ ကိုယ့်ရဲ့ခံယူချက်အမှားတွေ၊ အပြုအမူအမှားတွေ၊ အကျင့်စရိုက်အမှားတွေနဲ့ စိတ်ခံစားချက်အမှားတွေ ဒီလိုအမှားတွေဟာ လူတိုင်းဆီမှာ အနည်းနဲ့အများဆိုသလို ရှိနေတတ်ပါတယ်။ တစ်ခါတစ်လေမှာ မှားမှန်းသိရက်နဲ့ ပြင်ရခက်နေတဲ့ အမှားတွေရှိနေတတ်ပြီးတော့ ပြင်ရမှာကို ကြောက်နေတတ်ကြလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အဲတော့ လက်ရှိအချိန်အထိ မှားနေတဲ့ အမှားတွေထဲက ဒီလိုအချက်တွေကို ခုပဲ ရပ်တန့်လိုက်သင့်ပါပြီနော်။ (1) လူတွေရဲ့ အမြင်ကို ဂရုစိုက်လွန်းတာ လူတွေကို အရမ်းဂရုစိုက်ရင် လမ်းကျဉ်းတယ်ဆိုတဲ့ စကားရှိပါတယ်။ ကိုယ်သွားရမယ်လမ်းမှာ တစ်ခြားလူတွေရဲ့ အမြင်ကို ဂရုစိုက်နေမိတဲ့အခါ အဲဒီ့လမ်းဟာ ကိုယ့်အတွက်နေရာမရှိပဲ လမ်းကျဉ်းကျဉ်းလေးထဲမှာ လျှောက်နေရသလို စိတ်ကျဉ်းကျပ်တတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် လူတိုင်း …
အိမ်မက်မက်တတ်ရင်…သိမ်းထားပါ….(က) မှ (မ) ထိ [ က ] နှင့်ပက်သက်သော အိပ်မက်များ ———————————————— ၁။ ကြာမျိုးငါးပါးအနံ့ကို ရှုရသည်ဟု မြင်မက်မူ တည်ကြည့်စွာ ဂုဏ်သတင်းကျော်စောရအံ့ ၂။ ကြာညိုပန်းကို ပန်ရသည်ဟု မြင်မက်မူု မယားကောင်းရအံ့ ၃။ ကြာသွတ်အိုးနှင့် ရေချိုးရသည်ဟု မြင်မက်မူ သူတစ်ပါးတို့၏မှီခိုရာ ဖြစ်အံ့။ ကြာသွတ်အိုးမြင်မက်မူ စည်းစိမ်များအံ့ ၄။ ကြာပန်းစသည်မြင်မက်မူ ဖျားနာအံ့ ၅။ ကျွဲစီးရသည်ဟု မြင်မက်မူ ကျေးကျွန်ရအံ့ ၆။ ကျွဲ၊ နွား၊ ဝက်၊ မြေခွေး၊ လင်းတ တိရစ္ဆာန်တို့ကို မြင်မက်မူ ဥပါဒ်ရောက်အံ့ ၇။ ကျွဲ၊ နွား၊ ဝက်၊ ဆင်၊ …
အကြိုက်ဆုံးပုံကို ရွေးလိုက်ပါ …သင့်ရဲ့ တကယ့် အတွင်းစိတ်ကို ပြောပြပေးလိမ့်မယ်… လူအမျိုးမျိုး စိတ်အထွေထွေ ရှိကြတဲ့အတွက် အကြိုက်ဆုံးပုံ တစ်ပုံရွေးလိုက်ရုံနဲ့ အဲ့ဒီလူက ဘယ်လို လူမျိုးဖြစ်တယ်၊ သူ့ရဲ့ တကယ့် အတွင်းစိတ်က ဘယ်လိုဆိုတာ တပ်အပ်ပြောဖို့ကတော့ ခက်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း အနီးစပ်ဆုံး ခန့်မှန်း ဖော်ပြထားတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် တူညီတာ များနိုင်ပါတယ်။ ကဲ အကြိုက်ဆုံး ပုံ ရွေးပြီးပြီလား? ပုံ (၁) သင်က နံပါတ် ၁ ပုံကို ရွေးခဲ့တယ် ဆိုရင် သင်ဟာ သင့်ကိုယ်သင်ရော သင့်အနားမှာရှိနေတဲ့သူတွေကိုပါ တန်ဖိုးထားတတ်သူ တစ်ယောက်ပါ။ အကူအညီတောင်းရင် ပေးဖို့ ဝန်မလေးတတ်သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ချို့က သင်က အားနာလွယ်တယ်။ …
ကြံရည်ကြိုက်သူများ လုံးဝကျော်မသွားနဲ့နော် ကြောက်ဖို့ကောင်းလွန်းလို့ ယုံတောင်မယုံနိုင်ဘူး… ကြံရည်မှာ လူကိုအန္တရာယ် ဖြစ်စေနိုင်သော ဓာတုပစ္စည်းများ စွာသာမက ဘက်တီးရီးယားပိုး မြောက်များစွာပါဝင်တာကို စင်္ကာပူ နိုင်ငံ MOH မှ investigation လုပ်ရာမှာ တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ် … ။ စင်္ကာပူ နိုင်ငံ စားသောက်ဆိုင် တွေဟာ ကမ္ဘာက စံထားရလောက်အောင် သန့်ရှင်းပါတယ် …. ။ ဆိုင်တွေကိုလည်း ကြပ်ကြပ်မတ်မတ် စီစစ်လေ့ရှိပြီး Grade A , Grade B စသဖြင့် သန့်ရှင်းသပ်ရပ်မှုကို ခွဲခြား ထားပေးလေ့ရှိပါတယ် … ။ ကြံရည်မှာ ဘက်တီးရီးယားပိုး များစွာပါဝင်ကြောင်း တိုင်တန်းမှုများပြုလုပ်လာ တဲ့အခါ မှာ MOH …
အရပ်ရှည်ချင်ရင် ဒါတွေစားပေးပါ. . . အရပ်ရှည်ခြင်း၊ ပုခြင်းဟာ မိဘမျိုးရိုးနဲ့ပဲ သက်ဆိုင်တယ်ဆိုတဲ့အဆိုဟာ သိပ်တော့မမှန်ကန်လှပါဘူး။ တကယ်လို့ သင်ဟာ မျိုးရိုးကြောင့် အရပ်ပုနေမယ်ဆိုရင်တောင် အရပ်ရှည်လာအောင်ကြိုးစားဖို့ အခွင့်အရေးရှိပါတယ်။ ရေကူးခြင်း၊ စက်ဘီးစီးခြင်း၊ ကြိုးခုန်ခြင်း အစရှိတဲ့အားကစားနည်းတွေက သင့်ကို အရပ်ရှည်လာအောင်ကူညီပေးမှာပါ။ ထို့အတူ အရပ်ရှည်ဖို့အတွက် စားသင့်တဲ့ အစားအသောက်ကောင်းများစွားလည်း ရှိပါတယ်။အဆိုပါအစားအသောက်တွေကတော့… (၁) ပဲပြား ပဲပြားမှာ ကယ်ဆီယံဓာတ်ကြွယ်ဝစွာ ပါဝင်ပါတယ်။ သို့ပေမဲ့ ကယ်လိုရီပမာဏ အနည်းငယ်ပဲ ပါဝင်တဲ့အတွက် Diet လုပ်နေသူတွေအတွက် အသုံးဝင်လှပါတယ် …။ (၂) ဖရုံသီးစေ့ ဖရုံစေ့ဟာ ခန္ဓာကိုယ်က တစ်သျှူးတွေကျန်မာဖို့နှင့် တစ်သျှူးအသစ်တွေ မွေးဖွားလာဖို့ ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။ ဖရုံစေ့မှာ ပါဝင်တဲ့ အမိုင်နိုအက်စစ်ဟာ …
သင့်လက်ကောက်ဝတ်ပေါ်မှာ ဘယ်နှစ်ကြောင်းပါလဲ ပြီးရင် ဘာတွေဖြစ်တတ်သလဲ လက်ဝါးပြင်က လမ်းကြောင်းတွေလိုပဲ လက်ကောက်ဝတ်က လမ်းကြောင်းလေးတွေကနေလည်း သင့်ရဲ့ ကံကြမ္မာကို ကောင်းကောင်း သိနိုင်ပါတယ် … ။ လက္ခဏာပညာတတ်စရာမလိုဘဲ အလွယ်တကူနဲ့ လူတိုင်းကြည့်ြ့ပီးတော့ နားလည်နိုင်တဲ့ နည်းလေးကိုသုံးပြီး….. ကံကြမ္မာ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို ကျွန်တော်တို့တွေ အခုပဲ ကြည့်လိုက်ရအောင်နော် … ။ ပုံမှန်ဆိုရင်တော့ သာမန်လူတစ်ယောက်မှာ လက်ကောက်ဝတ်မှာ လမ်းကြောင်း ၂ ကြောင်း သို့မဟုတ် လမ်းကြောင်း ၃ ကြောင်းရှိတတ်တာပြဲဖြစ်ပါတယ် … ။ ထိုလမ်းကြောင်းတွေကတော့…. လမ်းကြောင်း 1 ——————- အပေါ်ဆုံးလမ်းကြောင်းက လူတစ်ယောက်ရဲ့ ကျန်းမာရေးကို ပြပါတယ်။ လမ်းကြောင်းထင်ရှားပြီး တစ်ဆက်တည်းရှိမယ်ဆိုရင် ကျန်းမာရေးအရမ်းကောင်းတယ်ဆိုတာကို ပြပါတယ်။ …
ဒီအချက် (၉)ချက်စလုံး ဖတ်လို့ နားလည်သွားရင် လူဖြစ်ရတာ ပျော်လာမှာပါ… ( အရမ်းကောင်းလွန်းလို့ ဝေမျှပေးတာပါ ဖတ်ဖြစ်အောင် ဖတ်ကြည့်စေချင်ပါတယ် ) Beabetter than you ကိစ္စတိုင်းကို နင်မှားတယ်၊ ငါမှန်တယ် လုပ်စရာမှမဟုတ်တာ။ အိမ်သူအိမ်သားနဲ့ စကားနိုင် လုတယ်၊ လုလို့နိုင်သွားတယ် ၊ ၅၂၈ လျော့သွားတယ်။ ချစ်သူနဲ့ စကားနိုင် လုတယ်၊ လုလို့နိုင်သွားတယ် ၊ ၁၅၀၀ လျော့သွားတယ်။ သူငယ်ချင်းနဲ့ စကားနိုင် လုတယ်၊ လုလို့နိုင်သွားတယ် ၊ သူငယ်ချင်းသံယောဇဉ် လျော့သွားတယ်။ လုတာက ခဏနေမေ့မယ့်ကိစ္စ၊ ရှုံးတာက သံယောဇဉ်၊ နာကျင်ရတာက မိမိကိုယ်ကို။ အဖြူက အဖြူ၊ …
အိပ်မက်ကာရန် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးအတွက် အကတိုက်နေတဲ့ နေတိုးနဲ့ နီနီခင်ဇော်
ရုပ်ရှင်လောကမှာ ထိပ်တန်းမင်းသားတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ နေတိုးကတော့ ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးမှုတွေ အချစ်တွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ မင်းသားတစ်ယောက်ပါ။ သရုပ်ဆောင်ကောင်းချက်ကတော့ နေတိုးလို့ ပြောလိုက်တာနဲ့ ခံစားချက်တွေရင်ထဲမှာ အရင်ပြည့်နေသလို ဇာတ်ကောင်ရဲ့ ပုံစံကို ပေါ်လွင်အောင်သရုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိအချိန်ထိ မြန်မာပရိသတ်တွေရဲ့ အခိုင်အမာ အားပေးမှုကြီးကို ရရှိထားတဲ့ နေတိုးက ယခုနှစ်အတွင်းမှာလည်း ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေများစွာ ရိုက်ကူးနေပြီး လာမယ့် အကယ်ဒမီပေးပွဲအတွက်လည်း ပရိသတ်တွေရဲ့ ရင်ထဲက အကယ်ဒမီကို ရရှိနေပြီးသား အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါ တယ်။ အခုလည်း ဂီတလောမှာ အောင်မြင်ကျော်ကြားတဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ နီနီခင်ဇော်နဲ့အတူ “အိပ်မက် ကာရန်” ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီး ရိုက်ကူးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့ကတော့ နေတိုးနဲ့ နီနီခင်ဇော်တို့ နှစ်ယောက်ရဲ့ အကတိုက်နေတဲ့ ပုံရိပ်တွေကို မြင်တွေ့ရမှာပါ။ …
This Year : 146896
Total Users : 442029
Total views : 1699607